Pep Guardiola Oo Ka Hadlay Taam Ahaanshaha Jack Grealish Ka Hor Kulanka Paris Saint-Germain
HomeWararka CiyaarahaPep Guardiola oo ka hadlay taam ahaanshaha Jack Grealish ka hor kulanka Paris Saint-Germain
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa xaqiijiyay in Jack Grealish la qiimeyn doono ka hor inta uusan ka fikirin inuu u doorto kulanka Caawa ee Champions League ee ay wajahayaan Paris Saint-Germain .
25-sano jirkaan ayaa jug ka soo gaartay tababarka isagoo ku guda jira waajibaadka xulkiisa England, taasoo ku qasabtay inuu seego guushii 3-0 ee ay ka gaareen Everton isbuucii hore.
Grealish ayaa sidoo kale galabnimadii Talaadada ka fadhiistay tababarka kooxda koowaad ka hor kulankooda ugu dambeeya ee Group A oo ay PSG kula ciyaari doonaan garoonka Etihad Stadium, si kastaba ha ahaatee Guardiola ayaa sheegay in kubadsameeyaha uu dareemayo “fiicnaan aad u wanaagsan”.
“Jack aad ayuu u fiican yahay, waxaan heysanaa tababarkii ugu dambeeyay, waxaana go’aansan doonaa ka dib cidda ciyaari doonta,” tababaraha reer Spain ayaa u sheegay saxaafada Talaadadii.
50 jirkaan ayaa sidoo kale xaqiijiyay in Kevin De Bruyne uu ku sii jiro go’doon ka dib markii laga helay COVID-19 dhamaadkii usbuuca, wuxuuna daaha ka qaaday inuusan hubin goorta go’doominta Belgian uu dhamaan doono.
Man City ayaa ku jirta kaalinta 1-aad ee Group A, waxaana ay sii goosan kartaa wareega 16-ka ee Champions League hadii ay saddexda dhibcood ka xaqiijiyaan kooxda Mauricio Pochettino ee Etihad Stadium.